Askari katirsan ciidanka Somaliland oo shacab ku laayey magaalada Garoowe. - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Askari katirsan ciidanka Somaliland oo shacab ku laayey magaalada Garoowe.
Askari katirsan ciidanka Somaliland oo shacab ku laayey magaalada Garoowe.
Allbanaadir Media (GAROOWE)-Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxaa si aad ah looga hadal hayaa askari katirsan ciidanka maamulka Somaliland oo dad shacab ah ku dhaawacay mid kamid ah hotelada kuyaal magaalada Garoowe.
Arrintaan ayaa dhacday kadib markii nin ku hubaysnaa tooreey iyo bud uu weerar ku qaaday rag fadhiyey mid kamid ah goobaha lagu shaaho oo kuyaal gudaha magaalada Garoowe, isla markaana uu dhaawacyo fudud gaarsiiyey qaar kamid ah.
Ninka ayaa la sheegay inuu isagoo aan cidna la hadlin weerar ka bilaabay goobta, waxanaa ugu dambayn mulkiilihii Hudheelka oo kamid ahaa dadka la waxyeeleeyey uu wacay ciidanka ammaanka oo si deg deg ah u soo gaarey goobta weerarku ka dhacay.
Goob jooge ku sugnaa Hudheelka ayaa u xaqiijiyey Allbanaadir Media in ciidanka ammaanku ay ninkaasi gacanta ku dhigeen kadibna laga helay baastoolad uu sitay iyadooona la waydiiyey cidda uu yahay iyo sababta uu falkaan u geystey.
Ninka ayaa la xaqiijiyey inuu qirtay inuu yahay askari katirsnaa ciidanka Somaliand oo qaab shacab ahaana ku soo galay magaalada Garoowe, iyadoona ugu dambayn ciidanka ammaanka gobolka Nugaal ay xabsiga Garoowe u taxaabeen.